राजनीतिक दलका प्रवासी संगठन मात्र कमाउ धन्दामा लागेका छन् « प्रशासन
राजनीतिक दलका प्रवासी संगठन मात्र कमाउ धन्दामा लागेका छन्
२५ कार्तिक २०७३, बिहिबार
जहाजमा चढ्नेका मात्र लगत राख्ने कुसंस्कार
भारतमा रोजगारीकालागि दैनिक सयौंको संख्यामा नेपालीहरु जाने गरेका छन् । खुल्ला सीमाका कारण कति जान्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभएपनि त्यसरी भारत काम गर्न जाने नेपालीको संख्या ४० देखि ५० लाख भएको अनुमान छ । नेपालका अन्य जिल्लाबाट पनि नेपालीहरु भारत जाने गरेको भएपनि विशेषतः मध्य र सुदूरपश्चिका जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा भारतमा कामको खोजीमा जाने गरेका छन् । यति ठूलो संख्यामा नेपालीहरु भारतमा रहेपनि राज्यले उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अर्थात् भारतमा रोजगारीकालागि जानेहरुलाई सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकको सूचिमा नै राखेको छैन । त्यही भारतबाट कमाइ गरेर नेपालीहरुले ठूलो रकम नेपाल भित्र्याए पनि राज्यले उनीहरुलाई प्राथमिकतामा नराख्नु विडम्वना हो । भारतमा बसेर काम गर्दा होस् वा घर फर्किंदा उनीहरुले निकै दुखकष्ट व्यहोर्ने गरेका छन् ।
भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरुमध्ये मध्य र सुदूरपश्चिमका जिल्लाबाट जानेको संख्या धेरै छ । सरकारले यसलाई नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर यसमा सरकारले वेवास्ता गरेको छ । नेतादेखि सरकारी निकायका सम्वन्धीत प्रशासकहरुले बोल्ने भाषा एउटै हुन्छ भारतमा चालिस पचास लाख नेपाली होलान् । मात्र यति हो । यकिन तथ्यांक नै छैन । हामीले डोटी, अछाम र कञ्चनपुरमा गरेको अध्ययनबाट के पाइएको छ भने यी तीन जिल्लाबाट ८० प्रतिशत घरको मान्छे आफ्नो जीवनकालमा एक पटक भारत पुग्ने गरेकाछन् । यसबाट के बुझिन्छ भने भारत जाने मध्ये सुदूरपश्चिमका बढी छन् । अहिले पनि त्यहाँका करिब २८ प्रतिशत मानिस भारतमा नै छन् ।
बैदेशिक रोजगारीकालागि तेस्रो मुलुक अलि पढेलेखेका र अलि हुनेखाने नै जाने हुन् । भारत जाने भनेको अलि अनपढ र चरम गरिवीका मानिस जाने हुन् । जो तेश्रो मुलुकमा जान सक्दैन उ भारत जान्छ । त्यहाँ पनि उनीहरुले धेरै अप्ठ्यारा सहेर कमाइ गरेर ल्याउने हुन् । तर त्यसरी कमाइ गरेर ल्याएको रकम घर नआइपुग्दै बसमा, रेलमा र अझ बढी त नेपाल भारत सीमा नाका गड्डाचौकी, गौरीफन्टा लगायतका नाकाहरुमा लुटाउनु पर्छ । उनीहरुलाई दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले सताउने गरेका छन् । बढी मात्रामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले विभिन्न बहानामा लुट्ने गरेका छन् ।
अझ महिलालाई त सीमा नाकामा झनै समस्या हुने गरेको छ । सुरक्षाकर्मीले सीमा नाकामा सुरक्षा जाँच गर्ने नाममा पुरै शरीर छामछुम पार्नेदेखि दुव्र्यवहार गर्ने गरेका छन् ।
कामदारले २५ हजार भारतीय रुपैयाँ बोकेर ल्याउन पाउने प्रावधान छ । त्यसमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले विभिन्न डर देखाएर नेपाली कामदारसँग रकम लिने गरेका छन् । यो नियम आफैमा ठीक पनि छैन किनभने भारतमा नेपाली कामदारलाई बैंक खाता खोल्न त्यति सहज छैन । वर्षभरी कमाएको पैशा बोकेर ल्याउदा कानुनी डर देखाउदै लुट्ने उता बैंकबाट पठाउँदा खाता खोल्ने समस्या । यसले थप जटिलता भोग्नु परेको छ ।
यो समस्या बर्षौदेखि रही आएको भएपनि त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । यतिसम्म हुन्छ कि घर आउँदा बाटोमा ऊ लुटियो भने फेरि बाटैबाट भारत फर्किन्छ, उसको ऋण बढ्छ र केहीले त कमाएको सवै सकियो भनेर आत्महत्या गरेका उदाहरण समेत छन् । सरकार सुन्छ संचारमाध्यमले समाचार बनाउँछन त्यति हो ।
अझ महिलालाई त सीमा नाकामा झनै समस्या हुने गरेको छ । सुरक्षाकर्मीले सीमा नाकामा सुरक्षा जाँच गर्ने नाममा पुरै शरीर छामछुम पार्ने देखि लिएर दुव्र्यवहार समेत गर्ने गरेका छन् । महिलालाई चेकजाँच गर्दा महिला सुरक्षाकर्मि नै हुनुपर्ने भएपनि सिमा क्षेत्रमा नेपाल भारत दुवै तर्फका चेकपोष्टहरुमा महिला सुरक्षाकर्मी नभएको अवस्था छ ।
नेपालका हरेक राजनीतिक दलका प्रवासी संगठन भारतमा पनि छन् । उनीहरुले साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने भनेर टिकट कटाउने र नेपाली नेता घुमाउने भन्दा केही काम गरेका छैनन् । मात्र कमाउ धन्दामा लागेका छन् ।
त्यसैगरी टाँगावालाले समेत उनीहरुलाई लुट्ने गरेका छन् । भारतीय लगानीमा नेपालीको नाममा संचालित यस्ता टाँगाहरुले उसैपनि नेपाली भनेपछि बढी पैशा असुल्न खोज्छन् । त्यसैमाथि घर फर्किदा पोका पन्तुरा देखेपछि त झन् बार्गिनिङमा उत्रिन्छन् त्यति गर्दा पनि भएन भनेर सम्बन्धित ठाउँसम्म नै नपुर्याई आधा बाटोमा नै झार्ने गरेका छन् । जसको सुनुवाइ गर्ने स्पष्ट निकाय नहुँदा टागाबाट समेत नेपालीहरु दिनहुँ लुटिँदै आएका छन् ।
बेपत्ता हुने क्रम बढ्दो
भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरु बेपत्ता हुनेक्रम पछिल्लो समय बढेको छ । काम गर्न गएको दुई तीन बर्ष देखि चार पाँच बर्षसम्म सम्पर्कमा आउने तथा पैशा समेत पठाउने गरेको भएपनि त्यसपछि सम्पर्कमा नआउने गरेको पाइएको छ । डोटी, अछाम र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा गरिएको एक सर्भेक्षण अनुशार १ सय ४१ जना बेपत्ता भएको पाइएको छ ।
बेपत्ता हुने धेरै कारण रहेछन् । कुनै व्यक्ति सानोमा भारत गयो अनि उतै बस्यो, पछि उसलाई घर कहाँ हो, आफन्त को हुन् भन्ने नै थाहा नहुने रहेछ । तथ्याँक संकलनका क्रममा यस्ता व्यक्ति पनि भेटिए जो आफ्नो घरपरिवार, आफन्त चिन्न नसकेर पुनः भारत फर्किएकाछन् ।
अर्कोथरी व्यक्तिहरु लामो समयसम्म भारतमा काम गरेर बस्छन् । उतै बिहे गरेर घरजम गरेर बसेका पनि भेटिएका छन् । जो नेपाल फर्किन चाहदैनन् र परिवारको सम्पर्कमा पनि आउन चाहदैनन् ।
कार्यस्थलमा मारिने, दुर्घटनामा पर्ने तथा बिभिन्न कारण हत्या हुने लगायतका विविध कारणबाट बेपत्ता हुने गरेका देखिएको छ । हराएकाहरुलाई खोज्न त्यति सहज छैन । घरबाट जाँदाखेरी एक ठाउँ भनेर गएको हुन्छ । सधै एकै ठाउँमा भेटिदैन ।
अनि अर्को कार्यस्थलमा मारिने, दुर्घटनामा पर्ने तथा बिभिन्न कारण हत्या हुने लगायतका विविध कारणबाट बेपत्ता हुने गरेका देखिएको छ । हराएकाहरुलाई खोज्न त्यति सहज छैन । घरबाट जाँदाखेरी एक ठाउँ भनेर गएको हुन्छ । सधै एकै ठाउँमा भेटिदैन । बिचैमा कामको लागि अर्कोतिर पनि गएको हुनसक्छ । खोजीकालागि भनेर गएको ठाउँमा पुग्दा रित्तै फर्किनु पर्ने हुन्छ ।
भारतमा भएका छरछिमेक, आफन्त, नातागोता यताउति सोध्यो कहिँ पत्ता नलागे पछि माया नै मारेर बस्यो, यो अवस्था छ परिवारको । हराएको व्यक्ति खोजी गर्ने प्रक्रियाबारे परिवार अनविज्ञ छन् । अनि खोजीकालागि सहजीकरण गर्ने निकाय पनि छैन । गाउँबाट दिनभरी हिँडेर आयो सदरमुकाम पुग्दा सम्बन्धित निकाय नै छैन । वेपत्ता हुने समस्याले निम्त्याउने मानसिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याले परिवारका सदस्यहरुमा थप जटिलता निम्त्याउने गरेको छ । सिँगो परिवारको हेरविचार गर्ने एक्लो छोरा हुनेहरुका लागि त अझ बढी ।
सुुदूर पश्चिमका जिल्लाहरुमा कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने चलन छ । विहे गरेको केही समयमै कमाउन भारत पसेकाहरु उतै वेपत्ता भई दिँदा श्रीमतिले सबैभन्दा बढी कठिनाई भोग्नु पर्छ । धेरै जसोको विहे दर्ता हुँदैन । बच्चाको जन्मदर्ता हुँदैन ।जीबनको सहारा गुमाउनुको पीडा त छँदैछ त्यसपछि राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाहरुबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । त्यसैगरी सम्पत्तिको बाँडफाँटमा समस्या, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगाएत कानुनी प्रक्रियामा हुने अन्य सबै अल्झनहरुले उनिहरु सबैतिरबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । हेर्नुस् त मृत्यु प्रमाणिकरण नहुँदा कति समस्या झेल्नुपर्छ उसको परिवारले ?
रिसाउँछ सरकारी निकाय
हामीले मध्य र सुदूरपश्चिम जिल्लाबाट भारत गएर बेपत्ता भएकाहरुको तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि सरकारी निकाय प्रहरी प्रसासन र केही प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिसाउनुभयो । पछि केन्द्रबाटै सहसचिवको नेतृत्वमा खोजविन समिति वनाएर फिल्डस्तरसम्म एउटा टोली गएको थियो । त्यसपछि त केही सुधार हुनुपर्ने तर केही भएको छैन ।
भारतमा काम गर्न जाने नेपाली आफ्नै कारण पनि समस्यामा पर्ने गरेका छन् । सीमामा लुटिनुदेखि एचआइभी एड्स जस्तो भयानक रोग लिएर आउनुमा कामदारहरुको आफ्नै हात छ । उनीहरुको प्रमुख समस्या मादक पदार्थ सेवन हो । विहानैदेखि रक्सी खान्छन् । रक्सी खाने अनि जोपायो त्यहीसँग असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्ने । त्यस्तै घर फर्किंदा रक्सी खाएर झुलमान भएर आउने । हो त्यसैले आफूपनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । आफै रक्सि खाएर टिल भएपछि लुटिनु स्वभाविकै हो ।
सीमामा लुटिनुदेखि एचआइभी एड्स जस्तो भयानक रोग लिएर आउनुमा कामदारहरुको आफ्नै हात छ । उनीहरुको प्रमुख समस्या मादक पदार्थ सेवन हो । विहानैदेखि रक्सी खान्छन् ।
प्रवासी संगठन बेकामे
नेपालका हरेका राजनीतिक दलका प्रवासी संगठन भारतमा पनि छन् । उनीहरुले साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने भनेर टिकट कटाउने र नेपाली नेता घुमाउने भन्दा केही काम गरेका छैनन् । मात्र कमाउ धन्दामा लागेका छन् । उनीहरुलाई प्रवासमा नेपालीले भोग्नुपरेका दुःख पीडाका बारेमा सवै थाहा छ । यदि राजनीतिक दलले आफ्ना संगठनसँग यस बारेमा रिपोटिङ् लिएर समाधान गर्न चाहेको खण्डमा समाधान निस्किदैन र !
पछिल्लो अवधिमा सुधारकालागि पहल हुँदै नभएका त होइनन् तर त्यसलाई विशेष कार्यक्रमकै रुपमा अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । जस्तोः डोटीमा जिल्ला परिषदबाटै भारत जानेको तथ्यांक अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । भारत जानेले अनिवार्यरुपमा गाविसमा नाम लेखाउनु पर्ने र नलेखाए सरकारी सुविधा नदिने भनेर कडाइ गर्यो भने सबैले अनिवार्य रुपमा त्यसको पालना गर्छन् । त्यसैले यसलाई सरकारले विशेष कार्यक्रमकै रुपमा अघि बढाउन सकेको खण्डमा केही मात्रामा लगत राख्न सकिने छ । पछिल्लो समय विभिन्न संघसस्थाको पहलमा परिवारले वेपत्ताको नाम लेखाउन भने थालेका छन्, जसलाई राम्रो प्रयासका रुपमा लिन सकिन्छ ।
नीति बनाउँदाखेरी नै बैदेशिक रोजागारीमा जाने मुलुकको सूचीमा भारत भन्ने शव्द राख्नुप¥यो । सीमामा डेस्क स्थापना गर्नुुपर्छ र लगत राख्नुपर्छ । यसबाट तथ्यांक आइहाल्छ नि । तेस्रो मुलुक जाने नेपाली कामदारको सरकारले वीमा गर्ने गरेको छ । भारत काम गर्न जानेको पनि वीमा गर्नुपर्छ र कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्छ ।
खाडी मुलुकमा नेपाली समस्यामा पर्यो भने सरकार गम्भीर भएर लाग्छ उसको उद्धारका लागि तर भारतमा मतलबै छैन । त्यसैले बैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै नेपालीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्यो । भारतमा नेपालीले बैंक खाता खोल्न पाउँदैन । नेपालीले बैंकबाट पैसा पठाउँदा एक पटकमा पचास हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पठाउन पाउँदैन । यसको लिमिट बढाउनु प¥योे । सरकारको उच्च तहबाट पहल गरी बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्नुप¥यो । त्यस्तै भारतबाट नेपाल टेलिफोन गर्न महंगो शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसलाई सस्तो बनाउन सरकारले पहल गर्नुप¥यो । खुल्ला सीमा भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन । यति धेरै संख्यामा नेपाली कामदार भारतमा छन् र उनिहरुले त्यतिकै मात्रामा पैशा नेपाल पठाउछन् भने उनिहरुका लागि राज्यले पनि त केही लगानी गर्नुपर्यो नि ।
मढै निड्स नेपालका कार्यक्रम प्रवन्धक हुन्
Tags : बैदेशिक रोजगारी भारत